Ekpere nye Nwa dị nsọ nke Atocha. ? Ụzọ mepere emepe, Nchedo na ahụike.
Ekpere diri Nwa nke Atocha. Anyị bụ ndị kwenyere n'okwukwe ma na-eme Katọlik, emeela otu ugboro na ndụ ha niile Ekele diri Nwa nke Atocha ọkachasị na mba dịka Venezuela, Spain, Colombia, Honduras, Philippines, United States na na Mexico, bụrụ nke ikpeazụ ebe a na-akwanyere ya ùgwù karịa ebe o nwere ebe ụfọdụ ebe a na-asọpụrụ ya kwa ụbọchị ma na-anabata ọtụtụ puku ndị nleta kwa afọ.
Ọ bụ otu n'ime nkwado nke nwatakịrị ahụ Jizọs bụ onye ghọrọ onye a ma ama n'ihi ọtụtụ ọrụ ebube ndị amataara ya.
1 Ekpere diri Nwa nke Atocha onye obu?
2 Ekpere diri Nwa nke Atocha imeghe uzo
3 Ekpere diri Nwa nke Atocha maka nchebe
4 Ekpere ọrụ ebube maka ahụ ike
5 Santo Niño de Atocha siri ike?
Ekpere diri Nwa nke Atocha onye obu?
Obodo Atocha dị na Spen ma marakwa na narị afọ nke iri na atọ ndị Alakụba wakporo ya kpamkpam.
Ha tụrụ ndị niile na-eme okwukwe Ndị Kraịst mkpọrọ na-enweghị nri ma ọ bụ ihe ọ drinkụ drinkụ dị ka ụzọ ntaramahụhụ siri ike maka nkwenkwe ha.
N'oge ahụ, ọ bụ nanị ụmụaka dị afọ iri na abụọ ka e nyere ikike inye ndị mkpọrọ nri, ọ bụ ebe ahụ ka Nwa Nsọ nke Atocha gosipụtara ya.
Ndị mkpọrọ malitere nata nleta nwata ndị na-abịakwute ha kwa ụbọchị na nkata nri nke onye ọ bụla na-eriju afọ.
Ihe ịtụnanya bụ na nri anaghị agwụ agwụ na nkata ahụ nwere ihe ọ bụla maka ha.
Nwa nwoke ahụ yi uwe dị mfe dịka onye njem, mana ọ hụrụ ọrụ ebube nke mmụba nke ndị kwere ekwe maara na ọ bụ otu nwa ahụ ka Jizọs bịara inye ha nri.
Ekpere diri Nwa nke Atocha imeghe uzo
Infante de Atocha nwere obi ebere ma nwekwaa obi oma, abia m n’ibe gi ka m si wee hu gi n’anya ma choro gi, achoro m ka ị chegharia anya ebere gi n’ebe m no wee hu obi uto na nsogbu nke rikpuru m, emeela m ihe niile m nwere ike nsogbu dị njọ na ahụbeghịkwa m ihe ngwọta, gị onye ọrụ ebube dị otu a, esila n'ebe m nọ pụọ: m na-arịọsi gị ike ka ị zitere m enyemaka gị, ana m arịọ maka nkasi obi ma nyere aka gaa n'ihu na-agụ Mostlọ Nsọ na Nwa Nsọ nke Atocha, onye na-echebe mmadụ niile, nchebe nke onye n’enweghi enyemaka, onye n’agwọ ọrịa nke ọrịa ọ bụla.
Nwa dị ike dị nsọ: ana m ekele gị, a na m ekele gị taa ma m na-ekpegara gị ekpere ndị a: (Nna anyị atọ, Ekele Hael atọ na ebube atọ), na ncheta ụbọchị ị mebere nne ọma gị nke nne gị dị ụtọ ma dị mma, si obodo nsọ nke Jerusalem rue Bet-lehem.
Maka okwukwe m nwere n’ime gị, gee ntị n’arịrịọ m, maka ntụkwasị obi m tụkwasịrị gị, nye m ihe m ji obi umeala rịọ: (rịọ maka ihe ị chọrọ inweta.
Mụ onwe m hụrụ gị n'anya karịa ihe niile, achọrọ m inye gị otuto na-adịghị agwụ agwụ, na-esote oche nke Cherubim na Seraphim, jiri amamihe zuru oke chọọ ya mma. Atụrụ m anya, Nwa kacha mma dị nsọ nke Atocha, azịza obi ụtọ nye arịrịọ m.
Ama m na agaghị m enwe obi erughị ala banyere gị, na ị ga-enyekwa m ezi ọnwụ, ka m wee soro gị gaa na Betlehem nke Ebube.
Ya onwe ya, inyocha ihe omimi niile na ịkpa oke n'okporo ụzọ na-enye anyị ọrụ ebube nke igosi anyị ụzọ oge niile ka anyị wee nwee obi ike na nchekwa zuru oke na ha.
Ndị ahụ gafere ihe yiri ihe na-ezighi ezi ma ọ bụ enweghị ike ịgafe, o doro anya na ọ bụ site n'enyemaka nke Nwa Nsọ nke Atocha ị nwere ike ịgafe.
Ekpere nwere ike mee ka ụzọ anyị meghekwaa n’akụkụ ego, n’ọmụmụ ihe, anyị na ezinụlọ ma ọ bụ maka atụmatụ ma ọ bụ ebumnuche anyị chọrọ iru.
Ekpere diri Nwa nke Atocha maka nchebe
Nwa ahụ maara ihe bụ Jizọs nke Atocha, onye na - echebe mmadụ niile, oke nchekwa nke ndị na - enweghị enyemaka, dọkịta Chukwu nke ọrịa ọ bụla.
Nwa kacha ike, ana m ekele gị, ana m enye gị otuto n ’ụbọchị taa, ana m enyekwa gị Ndị Nna anyị atọ a, Kelee Mary na otuto maka njem ahụ ị mere, abatakwa n’ime ụlọ nne gị kacha mara mma, site na obodo nsọ ahụ nke Jerusalem ruo mgbe ị bịarutere. ka ọmụmụ ọmụmụ.
Maka ncheta ndị a m na-echeta n'ụbọchị a, a na m arịọ gị ka i nye m ihe m na-arịọ ...
Ego a nke m n’iru m onyinye ndi a wee soro ha na ndi ukwe kerub na seraphim, ndi amam-ihe n’akwukwo nma, nke m lere anya, nwa Atocha, obi uto n’ariri ihe m na-ario gi na nke m kwuru, ma m ji n’aka na m gaghi ahapu ya. Obi gbawara m banyere gị, m ga-enwetakwa ezigbo ọnwụ, ka m soro gị gaa ebe a mụrụ ebube nke ebube.
(N’ebe a ka aririọ ya na ndi nna anyi ato, ha na ekele itolu uku na otuto)
Onye na-echebe ndị kwere na ya n’agbanyeghi ọnọdụ ndị ahụ.
Ọzọkwa nyeere ndị mmadụ aka ma chebe ha onye huru ya ka oputara na ihe mbu anyi gakwa eme anyi.
O nwere ike ghara ịpụta n’ụdị nwatakịrị ma ọ bụ hụ ya ka ọ na-abịaru anyị nso mana ọrụ ebube ahụ ga-eme mgbe anyị ji okwukwe were obi anyị niile wee jiri obi anyị niile na-ege anyị ntị wee bịa na-akpọku anyị maka enyemaka.
Ekpere ọrụ ebube maka ahụ ike
Ezigbo Nwa Ahụike! Hụrụm n'anya ma dịkwa ụtọ! Nwa m m hụrụ n'anya, nkasi obi m dị ukwuu: abịarute m ọnụnọ nke ọrịa m na-arịa, na ntụkwasị obi kasịnụ na-arịọ Chineke maka enyemaka gị.
Ama m na mgbe ụnụ nọ n’ụwa a enwerela ọmịiko n’onye ọ bụla tara ahụhụ, ọkachasị ndị ihe mgbu na-emekpa.
Maka ya infinito ịhụnanya ị nwere inye, ị gwọrọ ha nrịanrịa na iru uju ha, na ọrụ ebube gị bụ ngosipụta ngosipụta nke ịdị mma gị, ịhụnanya ebighi ebi na ebere.
Yabụ, nwa Ahụike !, nwa m hụrụ n'anya, nkasi obi m dị ukwuu, eji m obi umeala rịọ gị ka nye m ike dị mkpa iji die ihe mgbu, ahụ efe na nkasi obi n'oge kachasị sie ike na, karịchaa, amara dị oke mma. Pụrụ iche, iji weghachite ike m, ike m, ahụike m, ọ bụrụ na ọ dabara na ọdịmma nke mkpụrụ obi m.
Site na ya m ga-enwe ike ito gị, kelee gị ma kwanyere gị ùgwù n'oge ndụ m niile.
Jide ike nke a ekpere ọrụ ebube na Santo Niño de Atocha maka ahụike.
Onweghi ihe isi ike di na Nwa nke Atocha adighi nwere ike inye aka gị dị egwu.
Cheta na anyị na-ekwu maka otu Onyenwe anyị Jizọs Kraịst nwụrụ maka anyị n'obe nke ajọ mmụọ ahụ wee bilie ọzọ n’ụbọchị nke atọ, otu ahụ nke gosipụtara n’akwụkwọ nsọ.
Onweghi oria ya onwe ya buterebeghi ebe o buuru oria anyi n’agha, nke ahu bu okwukwe anyi nwere mgbe anyi n’eme ya. ekpere a na-arịọ ọrụ ebube maka ahụ ike anyị.
Santo Niño de Atocha siri ike?
Akụkọ banyere Jizọs kemgbe m batara n’afọ nke Nwa agbọghọ Meri amaghị bụ ọrụ ebube ma dịkwa ike.
Ikwere na ike a efuola bụ omume nke enweghị okwukwe nke na-abịakarị anyị dịka ngwaahịa sitere n'ọgba ndị otu onye iro na-akụ n’uche anyị iji mee ka anyị nwe obi abụọ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ afọ nke ọnwụ na mbilite n’ọnwụ nke Jizọs Kraịst, anyị kwenyere n’ike ọrụ ebube ya.
Thekpọ oku nke Nwa dị nsọ nke Atocha bụ ihe ịrịba ama na ike ya dị ukwuu ma na ọ ka na-echeta anyị bụ ndị kwenyere na ya. Ka anyị gaa n’ihu ikwere ma jiri okwukwe na-ekpe ekpere, ọ ga-anọgide na-enyere anyị aka ma jiri ịhụnanya na-enweghị njedebe zaa arịrịọ anyị.
Atụrụ m anya na masịrị Nwa Nsọ nke Atocha.
Ekpere maka Saint Mark nke Leon nke na-abịa
Ekpere nye Saint Helena ọrụ ebube